Gịnị bụ Netnography? | Martech Zone
Nụ nụrụ echiche m na onye zụrụ ya na mebere ink bụ obere sonye na blog post, na m na-na na hụrụ a ọhụrụ na mma ụzọ kasị mma nke na-eke asịwo personas.
Netnography apụtawo dị ka ngwa ngwa ngwa ngwa, ịrụ ọrụ nke ọma, na nke ziri ezi onye zụrụ ya. Otu ụzọ nke a bụ ụlọ ọrụ na-eme nchọpụta n'ịntanetị na-eji data mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze (geotagged) nyochaa mmekọrịta mmekọrịta na mmasị ndị ahịa dabere na mpaghara akọwapụtara. Ihe ntanetị ndị a nwere ike ime ka ndị ọrụ dọkpụrụ radius gburugburu ebe ọ bụla ha họọrọ, ma "kpochapụ" ụdị data niile sitere na ndị nọ n'ime mpaghara ahụ.
Nkọwa nke Netnography
Netnography bụ ngalaba nke ethnography (nkọwa sayensị nke omenala nke ndị mmadụ na ọdịbendị) na-enyocha omume nnwere onwe nke ndị mmadụ n'otu n'otu na Internetntanetị na-eji usoro nyocha ahịa n'ịntanetị iji nye nghọta bara uru.
Netnography na-achikota ma nyochaa data banyere omume efu ndi mmadu na ndi mmadu na Intanet. Isi ihe bụ na anakọtara data a mgbe ndị na-azụ ahịa na-eme nnwere onwe ha, ma ọ bụghị nyocha nyocha nke ndị ahịa na-aza mgbe ụfọdụ iji gbochie ihere ma ọ bụ mee onye nyocha ahụ.
Yerzụ onye persona nnyocha Akuko bu ihe omuma zuru oke nke bu ihe ngosi nke ndu ndu, ahia, na ihe ndi ozo. Ndị nyocha nyocha na-achịkọta akụkọ ahụ wee mepụta profaịlụ nke ngalaba nke onye zụrụ ahịa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ọ bụ ngwa ọrụ dị egwu maka ndị na - ere ahịa n ’ihi na enwere ike ịchịkọta data ahụ ọsọ ọsọ ma ọfụma. Netnography bara uru n'ihi na ụlọ ọrụ nwere ike ịnakọta profaịlụ ha n'otu ntabi anya kama ịnara izu ma ọ bụ ọnwa iji chịkọta nyocha ahụ. Nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche dị na nyocha ọdịnala nke nwere ike iwe ọtụtụ ọnwa iji chịkọta ma nyochaa. Ka ọ na-erule oge ị nwetara ụdị nyocha ahụ, onye nwere ike ịzụta gị nwere ike gbanwee ntakịrị. Ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ.
Yabụ, ozugbo ahụ, ịmara onye ndị ahịa gị kacha baa uru bụ, ihe ha masịrị ya n'oge ahụ, yana otu na ihe kpatara ha ji eso ndị ọgbọ ha akpakọrịta.
Researchdị nyocha mmadụ a na-ewepụta data dị oke mkpa gbasara ndị ahịa gị kacha baa uru gụnyere ego ezinụlọ, agbụrụ, isi mgbu, ebumnuche, mmetụta, mmemme / ihe omume ntụrụndụ, na ndị ọzọ. Akụkọ ndị a nwekwara ike ịgwa gị ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ụdị onye ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ yana isiokwu ise kachasị mma ị nwere ike iji ruo ha.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ akụkọ Netnography maka ndị ahịa gị, biko kpọtụrụ m.
Tags: onye zụrụ yausoro ihe omumuNtanetịnyocha mmadupersonaxRobert Kozinets